Maxaad Ka Taqaan Lama Ilawaanka U Dhexeeya Jabuuti Iyo Somaliland | Somaliland.Org
October 27, 2008	Sida dhowaan lagu faafiyeey warbaahinta Somalida M/weynaha Jabuuti Ismail Omar Geele ayaa khudbad uu ka jeedinaayey munaasibadii ciida wuxu kusoo qaaday Somaliland oo uu ka sheegay ammaan uu weliba bal-balaadhiyey oo sheegay sidii ay ku timi iyo siday kusoo unkantay, taas oo uu taabtay labadii shir ee ka kala dhacay Burco iyo Boorama.
Hadaba iyadoo aan ammaanta iyo wanaaga Somaliland cidina ka xigin Mr Geele marka dhinackasta la eego, ayuu hadana Ismaaciil ahaa nin ku caan baxay inuu Somaliland ku hubsado badhtamaha dufaanka colaadeed ee ragaadiyey Somalia, aanu meelkasta ka sheegi jirey inay qayb ka yihiin mushkilada Somalia.
Markaa mar haddii aanay ahayn arrinta Somaliland mid cusub waxaa aad laysu waydiiyey waxa maanta keeney waxaana isaga marlabaad la weydiinyey arrintaas, nasiib darose kama bixin jawaab waafi ah.
Hadaba waxaan isku deyeynaa inaan si kooban u eegno sababta arin kan maanta keentay, taasoo laga heli karo ficilada dalkaa yar ee damaca weyn. Waxaanan u kala qaadi doona laba qaybood oo kala ah.
Xiligii SNMta iyo intii ka danbaysey.
Kadib dhalashadii SNM waxaa Jabuuti ku abuurmay wer-wer ay ka qabeen in halgankaasi ku dhamaan doono lasoo noqoshada dalkii inta badan lagu taamaayey, halkaana ay ku baaqan doonaan heshiisyo mudo badan lagasoo shaqaynaayey kuwaaso ahaa in Petrolka Somaliland laga dhoofiyo Jabuuti, iyadoo Somaliland ledahay dekeda Gobolka ugu weyn, mashruucaas oo socday xitaa markii dagaalku ugu xumaa, oo ay wadeen shiriikado American ah.
Waxay markaa Jabuuti Af-weyne aad ugu cadaadisey sidii SNMta looga takhalusilahaa oo aan nimankan arin koodu sahlaneyn, taasoo loo maraayo inuu Mingiste la heshiiyo, waxanay isugu keentay Jabuuti.
Inkastoo Af-weyne ay ku adkayd inuu ka tanaasulo qadiyadii Somaligalbeed oo uu mudo dheer usoo dagaalamaayey, hadana uu ka yeelay qarshihii uu watay Alla haw naxaristee Hassan Guuleed, waxaana loogu abaal guday soo dhowayn iyo in dalka oo dhan lagusoo wareejiyo.
Hassan Guuleed, wuxuu Alla haw naxariste cidaa hada u ka hadlay Ismaaciil oo kale, goobjoogna aan ka ahaa ka sheegay, in dadkii xuduuda marba meel u yaaci jirey ay u dhamaatay. Balse may noqon, oo tii Alle ayaa laabnayd, waxaanan mudo yar kadib maqalay waxaa la haystaa Burco iyo Hargeysa.
Waxaa markaa Jabuuti kusoo batay dhaqdhaqaaq iyo hadal haytii SNMta, waxay markaa Jabuuti oo aad u cadhaysani bilawday dagaal ka dhan ah SNMta.
Waxay qab-qabteen dhalinyaro ka timi Hargaysa iyo qaar markaa joogay Jabuuti, waxaana gacanta loo geshey cidamadii faqashte ee Lawyacado, waxanay noqdeen wax la laayey iyo wax la xidhxidho.
Waxaa sidoo kale Jeelka Nagaadh laga buuxiyey dhalinyaro kale oo raacday Trainka Ethopia, si ay ugu biiraan halganka socda kuwaas oo lagasoo celiyey xadka, waxana meesha ku dhintay qaar badan oo dhalintaa kamid ah.
Waxay sidoo kale Jabuuti qabatay Baabuur loo waday SNMta oo uu siday Alla haw naxaristee Muj. Waraabe Cade, lakiin kumay guulaysan waayo wuxuu sitay Passport British ah sidaa ayaanay kaga joogsadeen.
Waxaa control la saaray maal qabeenkii reer Jabuuti ee asal ahaan kasoo jeeday Somaliland si aanay SNMta wax taakulay ah ugu geysan, balse taa lafteedu waxay yeelatay saamaynteeda sababtoo ah raggani waxay gacanta ku hayeen dhaqaalaa wadankoo dhan, waxaanay si aan gabasho lahayn ugu sheegeen inay colohooda ciday doodaan sii karaan oo ay xaq u leeyihiin.
Waxaa rag badan loo qabsaday inay SNMta isgaadhsiin kula hadlaan.
Guuldarooyin badan kadib waxay Jabuuti go’aan ku gaadhay inay eegto sida wax u dhacaan, oo bal la yara nasto.
Lasoco qaybta 2aad…………………… Yussuf Hassan (Yucuboole)